दशैं किन बहिष्कार, किन स्वीकार ? « Sajha Page
प्रकाशित मिति: October 2, 2017
तेज बान्तावा राई
दशैं नेपाली हिन्दुहरुको महान पर्व हो । “किन यो नितान्त नेपाली हिन्दु पर्व नै हो ?” भनेर दावी गर्न सकिन्छ किन भने खुद् हिन्दुहरुको देश हिन्दुस्तानमा समेत दशैं मनाइन्दैन बरु दुर्गा पूजा भनेर9दिन सम्म मनाइन्छ तर यहाँ जस्तो दशमीको दिन रातो टीका लगाउने प्रचलन अन्त छैन र त्यहाँ पनि नवरात्रको नाममा भव्य पूजा-आरती गरिए पनि त्यसलाई “दुर्गा पूजा” भनिने तर “दशैं” भनिँदैन, जव की खस् नेपाली र हिन्दी भाषा 80% भन्दा बढी मिल्छ । नेपाली भाषाको माउ भाषा र हिन्दी भाषाको माउ भाषा एउटै अर्थात “संस्कृत” हो र दुवै भाषा भारोपेली (Indo-Europian) परिवार भित्रका भाषाहरु हुन् ।
हिँजो-अस्ती सम्म नेपाल “हिन्दु अधिराज्य” थियो । यदा-कदा त्यसको अवसेष र धङ्धङी अझै बाँकी नै छ तथापी अहिले नेपाल”धर्म निरपेक्ष राष्ट्र” हो । पृथ्नी नारायण शाहले नै “नेपाल4वर्ण 36 जातको फूलवारी” भनी गएका भए पनि पञ्चायत कालमा वा त्यो भन्दा अगाडी राणा शासन कालमा सबै फूलहरुलाई एउटै रंग भर्ने (हिन्दुकरण गर्ने) सक्दो जोड-बल गरिएकै हो । त्यो वेला धार्मिक वा सांस्कृतिक स्वतन्त्रता त छँदै थिएन नै अझ कडा धार्मिक दमन नै थियो भन्ने त्यति खेरका घटनाहरु सुन्दा वा पढ्दा अनुमान गर्न सकिन्छ । दशैंमा घरमा मार हानेर त्यसको रगतमा टेकेर मुल दैलो (मुल ढोका) को दायाँ-बायाँ छाप नलगाएको आरोपमा धनकुटामा रिदामा र रामाली हाङ राईहरुलाई “मृत्यूदण्ड” भएको इतिहास छ ।
मेरो बाजे तत्कालिन “श्री3सरकारको सिपाही”, भोजपुर अड्डामा कार्यरत । “किरातीहरुको घरमा पसेर गोरुको टाउको निकालेर फ्याँक्ने र गोरु काट्नेलाई पक्रेर थुन्ने” वडा हाकिमको आदेश पालना गर्न नसकेर तत्कालीन मुक्ति कमान्डर क्या. राम प्रसाद राईको समुहमा “मुक्ति सेना” बन्नु परेको अरे । किरातीहरु मुख्य पित्री राखेको ठाउँ (माङ्छामा) मा अन्य पाछा वा जातले प्रवेश गरेमा ठूलो अनिष्ठ हुने सांस्कृतिक मान्यताको कारण उहाँलाई जागीरबाट हात धुनु परेको थियो । जागीर छाडेर घरै बस्दा पनि राणा सरकारको आदेश पालना नगरेको आरोपमा दु:ख दिन थालिए पछि बिद्रोही बन्नु भएछ र लड्दै जित्दै 2007 साल फाल्गुण7गते धुलिखेल आई पुग्दा राणा शासन समाप्त भएछ ।
अहिले “दशैं किराती पर्व नै हो र यो हामीले मान्नु पर्छ” भन्ने र “दशैं लादिएको पर्व हो हो यसलाई बहिस्कार गर्नु पर्छ” भन्ने दुई पक्ष वीच प्रत्यक्ष विवाद देखिएको छ । यही विवादका विच केही किरातीहरुले सेतो टीका लगाएर मनाए भने केही किरातीहरुले मनाएनन् वा बहिस्कार बहिस्कार गरे ।
“पृथ्वी नारायण शाह र तिनका सन्तानले किरातीहरुलाई काटेर रगतमा चामल मोलेर टीका लगाई दिएर सुरु गरिएको कारण दशैं बहिष्कृत हुनु पर्छ” भन्ने तर्क बहिष्कार गर्नेहरुको छ भने, “बाजेले गरि ल्याएको परम्परा” को रुपमा दशैं मनाउनेहरु पनि उत्तिकै छन् । अझै केहीले त दशैंलाई “कालो दिन” मान्दै कालो टीका लगाएको पनि देखियो यै फेसबुकमा ।
मेरो विचारमा दशैं “बहिष्कार” गरिनु हुँदैन । ईतिहासमा जस्तो घटना भएको भएता पनि दशैं एउटा समुदाय (नेपाली हिन्दु) ले आफ्नो संस्कृति बनाई सकेको हुनाले कसैको संस्कृति माथि बहिष्कार हुनु राम्रो होइन । “अतीवादले अतीवाद जन्माउने” भएकोले पनि धार्मिक सहिष्णुता कायम राखेकै राम्रो ।
पृथ्वी नारायण शाह र उनका सन्तानबाट नेपाल एकिकरणको नाममा र राणा शासन वा पञ्चायत कालमा जुन सांस्कृतिक अतिक्रमण भयो र हाम्रा पुर्खाले दमन सहे, त्यो यत्तिकै पानीमा बगाई दिने कुरा होइन । त्यसैले आजको युगमा “दशैं हाम्रै चाड हो” भन्दै टीका ढल्काउँदा उनै पुर्खाको उपहास भैरहे जस्तो देखिएको छ । त्यसैले किरातीहरुबाट दशैं “परित्याग” हुनु पर्छ । यसबाट कसैको (नेपाली हिन्दुहरुको) संस्कारमा ठेस पनि पुग्दैन र किराती संस्कारका अन्य चाड-बाडहरुमा पनि सांस्कृतिक सहिष्णुता बढ्नेछ ।
किन परित्याग गर्ने त दशैं ?
– किरातीहरु प्रकृति पूजक हुन । किरातीहरुको मुन्धुममा कहीँ कतै दशैं वा दुर्गा वा सुम्भ-असुम्भको प्रसंग आउँदैन र राम र रावणको कथा पनि जोडिँदैन । त्यसर्थ “दशैं” किराती चाड हुँदै होइन ।
– इतिहास पढ्दा पृथ्वी नारायण शाहले आफ्नो सत्रुहरुको क्षय दशैं कै अवसर पारेर गर्ने गरेको थुप्रै प्रसंगहरुबाट पनि “सत्रुको रगतमा चामल मुछेर टीका लगाएको” भन्ने आरोपमा केही सत्यता छ भन्ने बुझिन्छ ।
– “दशैं नेपाली चाड” भनिएता पनि यस सँग जोडिने प्रसंगहरु उनै हिन्दु धर्म कै आराध्य देवी “दुर्गा भवानीको पूजा” रहेको हुनाले गैर हिन्दुहरुले हिन्दु चाड मनाउनु पर्ने प्रश्नै उठ्दैन ।
– अर्काको संस्कार-संस्कृति हामीले अंगाल्दा त्यसको पूर्ण मान्यता दिन हामी असमर्थ हुन्छौं, जस्तो की; चण्डी-पाठ, मालश्री, नव रात्र पूजा आदी (जो दशैं मान्ने किरातीहरुले गरेको देखिँदैन) । यदि यसको आध्यात्मिक पक्षको बेवास्ता गरिए दशैं खाली बिना काम जाँड-रक्सी खाने, तास खेल्ने र आफन्त भेला पारेर रमाइलो गर्दै सम्पत्ति उडाउने बाहेक केही बाँकी रहँदैन ।
जहाँ सम्म दशैंको बाहनामा लामो छुट्टी, आफन्त भेटघाट, खान-पान, रमाइलोको कुरा छ, यो हामी किरातीहरुले साकेला उभौली र उधौलीमा गर्नु पर्छ । किरातीहरुले साकेला मै लामो छुट्टी लिनु पर्छ र आफन्तहरु विच भेट-घाट गर्ने, रमाइलो गर्ने, घुम-घाम गर्ने आदि गर्नु पर्दछ । यसले हाम्रो आफ्नै संस्कार-संस्कृतिको प्रवर्द्धन पनि हुनेछ भने अर्को तिर नेपाल साँच्चै नै साझा सांस्कृतिक फूलवारी पनि बन्नेछ । की कसो ?
(मेरो नितान्त व्यक्तिगत विचार ….)